I-Led Lighting Fiution Solution & Umkhiqizi We-Pendant Light | Isibani sikaHuayi
Isixazululo Sokukhanyisa Kwe-Professional
Ukukhanya okunempilo impilo engcono
Yasungulwa ngo-1986, etholakala eGuzhen Town edolobheni laseZhongshan, "inhloko-dolobha yokukhanyisa" yeChina.
Ochwepheshe ku r&D, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwemikhiqizo yokukhanyisa neminye imikhiqizo ehlobene
Isibani se-LED ebusuku
]Design Penguin Modeling Design.
Isibani sokufunda se-LED
]Iphaneli Yokuthinta Kathathu
]Idizayini yemfashini ye-minimalist
Isibuko se-cosmetic mirror
]I-Avant-Garde Modeling Design
I-Huayi Live Stream
Uhlobo lwedumela olukhulu kusukela ngo-1986, ukukhanya kweHuayi kunesifiso esivulekile ukuhola imboni yokukhanyisa endaweni ehlukahlukene yezindaba. Akunandaba uhlu olugcwele lwangaphakathi oluhle& Imikhiqizo yokukhanyisa engaphandle, noma i-7-star lightling showroom, noma ngaphezulu kwe-200000ssqm efektri efektri, sisilandele, sizokulethela uhambo oluhle ozokwazi ngeHuayi. Ukusakazwa kwamasonto onke kuzobanjelwa e-Alibaba International kanye nezinye izindlela zokuxhumana zokubonisa iHuayi Showroom& Ukubuka konke kwefektri kanye nokufika okusha kokuhweba, ukuhlobisa& Imikhiqizo yokukhanyisa,Isibani se-Industrial Pendant, Isitayela sezitayela sezimboni, ukukhanya kwesitayela sanamuhla, ukukhanya kwengilazi ukumiswa,ukukhanya okwenziwe ngokwezifiso, ikhwalithi ethembekile futhi ithembekile.
Yamukela ukunakwa kwakho okuqhubekayo. Izimanga eziningi zikulindile ...
I-Alibaba / Facebook / Klumia / YouTube: Huaylight
IKempinski Hotel Dubai exhumanisa inxanxathela yezitolo i-Emiras, amakamelo amahhotela anomhlobiso kanokusho anendawo yokugezela emabula, i-LCD TV enkulu nendawo yokudlela. Amanye amakamelo angabheka iDubai Ski Village.
I-India-Phoenix Market City
IHigh Street Phoenix, phambilini eyayaziwa ngePhoenix Mills, ingenye yezitolo ezinkulu kakhulu eNdiya, eziseLower Parel, eMumbai. Indawo yaso esezingeni eliphansi ingamamitha ayisikwele angama-3 300,000 Ngaphezu kwenxanxathela yezitolo, i-compond ibamba ihhotela lezinkanyezi ezinhlanu, i-multiplex, isikhala se-commercoal nombhoshongo wokuhlala.
IHilton Astana, ihhotela lesimanje ngaphakathi kwenkomfa yombukiso ye-EXPO-2017. Jabulela inkonzo esezingeni eliphakeme ngenkathi ulapha kanye nezinsiza ezicatshangelwe kahle njenge-spa yezempilo, ibha ephahleni, isikhungo sokuzivocavoca, ichibi elingaphakathi, i-Executive Lounge nezindawo ezibanzi zengqungquthela. Kuphakathi kwezindawo ezisenkabeni yedolobha, amahhovisi ezinkampani, uHulumeni weminyango nezinhlangano ze-Kazakhstan, kanye ne-Astana International Airport.
]Ungathanda ukuxhumana nathi
Vele usitshele izidingo zakho, singenza okungaphezu kokucabanga kwakho